प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई साइकल दिइएपछि म्याग्सेसे विजेता पुनको यस्तो व्यंग्य 1 year ago
काठमाडौँ, पुस १४ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘वातावरण मैत्री राष्ट्रिय अभियान’अन्तर्गत जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साइकल हस्तान्तरण गरे । 'हेलो सरकार ! कालोबजारी नियन्त्रण किन भएन ?' 1 year ago
काठमाडौँ । जनताको गुनासो सुन्नका लागि स्थापना गरिएको हेलो सकरमार सबैभन्दा बढी गुनासो कालोबजारी बढेको र नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएकामा नै केन्द्रित भएको छ ।
लिखित जावफसहित उपस्थिति हुन प्रधानमन्त्री कार्यालयलार्इ सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ, पुस १४ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित यही २८ गते उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
भवन भत्किदा १२ जना फसेको आशङ्का
नयाँ दिल्ली । भारतको मुम्बई सहरको एक भवन मङ्गलबार बिहान भत्किदा त्यसभित्र कम्तीमा पनि १२ व्यक्ति पुरिएको आशङ्का गरिएको एक बरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् ।
भद्रगोलका जयन्तेले झ्याईँ पारे
काठमाडौं । चर्चित हास्य टेलिसृङ्खला भद्रगोलमा ‘जयन्ते’ को भुमिकामा देखिने कलाकार गोविन्द कोइरालाले विवाह गरेका छन् ।
जानकी मन्दिर क्षेत्र तनावग्रस्त, पेट्रोल बम प्रहारबाट गोलघरमा आगो लाग्यो
जनकपुरधाम । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपका कारण जानकी मन्दिर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ । प्रदर्शकारीले जानकी प्रहरी चौकीलाई लक्ष्य गरी पेट्रोल बम प्रहार गरिरहेका छन् ।
ऋतिकसँग हट किस गर्ने ऐश्वर्या रणवीरसँग किन मानिनन् ?
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या रायले केही वर्षअघि धुम फिल्मका लागि नायक ऋतिक रोशनसँग हट किस गरेको विषय निकै हंगामा भएको थियो ।
महन्थ ठाकुर भन्छन्, 'पुस १९ पछि नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल हुन्छ'
काठमाडाैं, पुस १४ । तराई मधेस लोकतान्तिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पुष १९ गतेपछि बस्ने संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकमा नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने सहितको विषयमा छलफल हुने बताएका छन ।
जिल्ला नेताको हत्यारालार्इ गिरफ्तार गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउ : एमाले
काठमाडौँ, पुस १४ । नेकपा (एमाले), सर्लाही जिल्ला कमिटीका सदस्य रामनरेश राय यादवको आज बिहान हत्या भएको खबरले पार्टी स्तब्ध भएको एमालेले जनाएको छ ।
नेपालले चीनको सीमासम्म रेलमार्ग बनाउने, चीनले फेरि १४ लाख लिटर इन्धन दिने
काठमाडौँ, पुस १४ । चीनले नेपाललाई तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न एक करोड युआन बराबरको इन्धन अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त रकममा करिब १४ लाख लिटर पेट्रोल उपलब्ध हुनेछ ।
« 12...1787178817891790179117921793...18261827 »
Page 1790 of 1827